k6 - chakanakisa mushambadzi chiitiko chekuyera mutoro
Kuru Kuita k6 - Iyo Yakanakisa Yemushandisi Chiitiko cheMutoro Kuedzwa
k6 - Iyo Yakanakisa Yemushandisi Chiitiko cheMutoro Kuedzwa
Iyo indasitiri yekuyedza kuita yakaona shanduko huru mumakore apfuura. Pachivanhu, kuyerwa kwemutoro kwakaitwa neinjiniya dzekuyedza kuita, pamwe neinjiniya dzeQA nevanoedza. Aya mabasa aiwanzoshanda sezvikamu zvakazvimiririra, vachiita kuyedza kwekuita kana ivo vagadziri vapedza kuvaka izvo zvinoshandiswa.
Nekugamuchirwa kwemitemo inonamira pakati pezvikwata zvekuvandudza software, kuyedza kwekuita sechiitiko kunotanga kwamberi mukugadziriswa, kunonzi chinja-kuruboshwe kuyedza . Panzvimbo pekusiira kuyedza kwekuita kune dhipatimendi reQA, zvikwata zve software zvino zvinoita kuyedza kwavo zvakazvimiririra kana mukubatana neinjiniya dzeQA.
Imwe bhenefiti yekuchinjisa kuyedzwa kuruboshwe kuwedzera kuri kuwedzera mukutora kwekuyedza kwekuita muzvikwata zve software. Asi vazhinji veava vashandisi vatsva vanoda maturusi anokodzera mushe mune avo kufambiswa kwemazuva ese , vachivabvumira edza nguva dzose nesimba shoma. Zvishandiso zvetsika senge JMeter uye LoadRunner hazvina kukodzera izvo zvakanaka, uye pachinzvimbo, ivo vari kutendeukira kuchizvarwa chitsva chematurusi, senge k6.
k6 ndeye mahara uye yakavhurika-sosi mutoro wekuyedza turu chinangwa chekuita kuyedza kwekuita chiitiko chinogutsa uye chinonakidza.
Mutauro une simba wekunyora uye API inoratidza chinodiwa chinja kutevedzera chaiwo-epasi mamiriro mune ako zvinyorwa. Sezvo mashandisiro uye masisitimu achiramba achichinja, kuve nekwaniso yekumisikidza bvunzo dzako kunowedzera zvakanyanya kugona kwekuyedza kwako.
k6 ndeye Command Line Chishandiso inowanikwa yeWindows, Linux, uye Mac. Neimwe nzira, kune yepamutemo Docker mufananidzo.
Kumhanyisa bvunzo yekuita ne k6 zvakapusa sekumhanyisa bash command:
Zvishoma zvinozivikanwa zvekunyora zvinyorwa ndezvi:
Yakadzika kugadzirisa kuburikidza nenzira dzakawanda dzekumisikidza
Parameterization kuburikidza nemamiriro ekunze
Lifecycle zvikorekedzo zvekugadzirisa setup uye teardown
Macheki, metrics, tags, makuki…
Session rekodhi & vashanduri
Sematurusi akaomesesa ekuyedza mutoro, k6 ine rekodhi rekodhi iyo inogonesa kugadzirwa kwemiyedzo yemitoro kubva muchikamu chemushandisi. Iwe unongoda chete kupa iyo HAR faira kubva kubhurawuza kana mushandisi chikamu, uye rekodhi ichagadzira iyo k6 bvunzo yako. Izvi zvinonyanya kubatsira kana uri kurodha kuyedza mawebhusaiti .
Pamusoro pezvo, mamwe maturusi anogona kukubatsira kuti ugadzirise k6 bvunzo kubva kumatekinoroji akasiyana:
JMeter inoshandura: chinja JMeter .jmx faira ku k6 script.
Postman inoshandura: chinja Postman muunganidzwa kuita k6 script.
OpenAPI inoshandura: chinja Swagger / OpenAPI kududzirwa k6 script.
Browser yekuwedzera: gadzira k6 script kubva kubrowser chikamu. Inongowanikwa chete kune vashandisi veK6 Cloud.
Kunyangwe iwe usingade kushandisa rekodhi uye vashanduri kutanga kuyedza, maturusi aya anogona kubatsira kukwira timu yako mu k6, kana kunyora bvunzo dzako, nekukurumidza.
Nokusingaperi, k6 inoburitsa mhedzisiro kuconsole. Pamusoro pezvo, kusanganisa kwakati wandei kunowanikwa kuti ikubatsire panguva yekuongorora uye kuona kwemhedzisiro yako.
Kuenderera mberi uye otomatiki kuyedza
Munharaunda yekuyedza, otomatiki ndiyo yekupedzisira-chinangwa chemasangano mazhinji. Kana chishandiso chako nesisitimu zvachinja, kushandisa otomatiki uye kumhanyisa bvunzo kuchakubatsira kubata kudzoka kwekuita pakutanga
Zvinyorwa zvinopa magwara kune anonyanya kufarirwa maCI / CD maturusi, achikubvumidza iwe kuti usashanda nesimba kusanganisa k6 mune ako maCI mapaipi.
Iyo k6 timu inotenda kuti kugadzira kuyedza zvinangwa chinodikanwa chakakosha kune otomatiki. Kana uchimhanyisa otomatiki bvunzo, bvunzo yako yekutanga chinangwa chinofanira kuve chekutanga kugadzirisa kuita kwekutarisira kweiyo system yako, uye chechipiri, kukuzivisa kana iyo system ikasazadzisa zvinangwa zvekuita. Semuenzaniso, ichisimbisa izvo:
Nguva yekupindura 95% yezvikumbiro haisi pamusoro pe600ms.
Iyo system haina kuburitsa inopfuura 0.5% zvikanganiso.
Mu k6, iwe unotsanangura izvi zvinotarisirwa ne Zvikumbaridzo pamuedzo wako. Kana yako system ikasasvika kwavari, k6 inokuzivisa iwe nezve kutadza kudzorera isiri-zero yekubuda kodhi.
Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda pamusoro penyaya iyi, verenga k6 gwara re mashandiro ekuedza otomatiki uye zvinyorwa zveThresholds.
k6 Gore ndiyo yekutengesa SaaS chigadzirwa chinofambidzana neyakavhurika-sosi k6 chishandiso. k6 OSS yakasununguka kushandisa uye ine akati wandei kubatanidzwa kugadzirisa bvunzo dzemitoro mune yako mezvivakwa. Iyo k6 Cloud isarudzo yekusarudzika iyo inopa mutoro kuyedza zvivakwa uye masystem ekukubatsira iwe neyako kuita kwekuyedza kuyedza.
Kuti tinzwisise zvirinani kuti chii k6 Cloud, ngativerenge mashoma acho.
Scale inoedza yakatwasuka uye munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo.
Chengetedza uye fungidzira mhinduro dzekuedzwa.
Tsvaga maitiro ekuita otomatiki.
Correlate mhedzisiro pakati pebvunzo dzakasiyana.
Vashandisi veboardboard neiyo GUI bvunzo yekuvaka.
Ronga zvikwata uye bvunzo munzvimbo yepakati.
Ipa rutsigiro rwakazvipira.
Nharaunda yek6 inotsigira zvechokwadi uye inobatsira - simba riri shure kwekubudirira kweprojekti.
Kana iwe uri kutanga ne k6, usakanganwa kuvasvikira mukati Usimbe kana iyo nharaunda yemusangano kune chero mhando yemibvunzo. Kune akati wandei makwara uye zvikamu zvezvinyorwa zvakasiyana senge #grafana, #documentation, #feedback, #discussion, nezvimwe.
Kune avo vanofarira vekunze kweprojekiti, tevera chirongwa ichi mu GitHub .
Iyi posvo inovavarira kuratidza intro ye k6 - chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza mutoro zvekuyedza maturusi. Kana iwe uchida kudzidza izvo zvimwe zvine k6 yekupa, tinokurudzira kuverenga iyo k6 Docs .
Iine makore mana chete ehupenyu, k6 yave ficha-yakapfuma uye inokwikwidza nemidziyo yakasimbiswa, kuwana stellar kutorwa mune vanogadzira, DevOps, uye kuyedza nharaunda.
Iyo k6 timu uye nharaunda yakavaka yekuvandudza-centric yekuyedza yekushandisa turu inosangana nezvinodiwa uye zvinodiwa zvenguva nyowani.
yakanakisa sony xperia foni 2016
mitambo yakaita kufona kwebasa renhare
Apple & apos; s AirPods uye AirPods Pro zvese zviri kutengeswa nemitengo yakaderera kwazvo izvozvi
T-Nhare vatengi vanogona & apos; gara wakabatana 'uye chengetedza makumi mashanu kubva muzana pazvirongwa zvavo panguva yechirwere checoronavirus
Maitiro ekutora skrini paPad
Galaxy S20-yakateerana kutenga gwara: Unofanirwa kukwidziridza kubva kune yako Galaxy S8, S9, kana S10-nhare foni?
2020 Apple Watch Series 6 kuti ikurumidze uye iwedzere kuramba mvura
Verizon ikozvino inopa zuva rimwe chetero rakatsemurwa kugadzirisa skrini neiyo Yayo Yese Nhare Dziviriro Chirongwa
Akanakisa chikwama kesi dzeSamsung Galaxy Note 8
Alcatel OneTouch Idhori 3 (5.5-inch) Ongororo
Facebook Messenger inovandudzwa Nerima Mode marongero pane Android app